कसरी कम्प्युटरमा कुलपति को पुरानो संस्करण फर्कन?
सामाजिक "VKontakte" नेटवर्क सबैभन्दा लोकप्रिय मध्ये एक छ। मिति, विश्वभरिबाट प्रयोगकर्ताहरूको लाखौं दैनिक यस अनलाइन स्रोत जानुहोस्। यो रूस, युक्रेन र बेलारुस को बस बासिन्दाहरू, तर पनि अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स र अन्य देशहरूमा छैन।
हालसालै, सामाजिक सञ्जाल "VKontakte" यसको डिजाइन परिवर्तन भएको छ। आज, धेरै कुलपति को पुरानो संस्करण कसरी प्राप्त र तपाईं यो गर्न सक्छन् कि गर्न आश्चर्य। अब हामी यस प्रश्नको जवाफ प्रयास गर्नेछ, र विस्तार व्याख्या तपाईं सबै accustomed भएका छन् जो नयाँ पुरानो सामाजिक सञ्जाल को लागि संस्करण, कसरी परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। जाऔं!
संस्करण किन अद्यावधिक गरिएको छ?
लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल "VKontakte" को नयाँ संस्करण अप्रिल 2016 मा भएको थियो। यसलाई पहिले नै समय एक लामो अवधिको लागि अस्तित्व छ किनभने अघिल्लो संस्करण, अप्रचलित छ। यसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ पहिलो पटक कि सामाजिक प्रतिनिधिको छ। नेटवर्क नयाँ डिजाइन को परीक्षण, प्रत्येक प्रयोगकर्ता नयाँ संस्करणको लागि जोडिएको हुन मौका छ सञ्चालन, र त्यसपछि, उहाँले मन भने होइन वा असहज थियो, त्यो पुरानो फर्कन सकें।
पछि, विशेषज्ञहरु लागि नयाँ संस्करण शुरू र पुरानो एक फर्केपछि को संभावना हटाएका छौं। यो मान्छे र प्रश्नहरू अपग्रेड पछि कुलपति को पुरानो संस्करण कसरी प्राप्त गर्न, सुरू त थियो।
"VKontakte" को नयाँ संस्करण
जुन9पछिल्लो 2016 मा VK प्रयोगकर्ताहरूको बारेमा 10% सामाजिक सञ्जाल को नयाँ संस्करण जोडिएको थियो। अद्यावधिक आफ्नै देखा परेको छ यो, दबावपूर्ण गरेको थियो, र सम्भव साइटमा पहुँच बिना पुरानो संस्करण फर्काउने। तथापि, 17 अगस्ट 2016 सामाजिक सञ्जाल "VKontakte" पूर्ण सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि यसको डिजाइन अद्यावधिक किनभने, यो सबै समाप्त भयो। एकै समयमा पुरानो संस्करणमा फिर्ता जान मौका सामाजिक प्रत्येक दर्ता व्यक्ति हराइरहेको छ। नेटवर्क।
कि पछि, समय को एक लामो अवधिमा मान्छे तपाईं VK को पुरानो संस्करणमा फर्कन सक्नुहुन्छ कि पत्ता लगाउन प्रयास। यसबाहेक, जवाफ हो भने, तिनीहरूले यो कसरी गर्न सकिन्छ जान्न चाहन्छु। सामाजिक सञ्जाल "VKontakte" को प्रतिनिधिहरु द्वारा भन्यो, साइट को पुरानो संस्करणमा एक फिर्ती कहिल्यै हुनेछ!
पूर्णतया "VKontakte" को पुरानो संस्करण पुनर्स्थापना पर्याप्त समस्याग्रस्त छ, तर केही परिवर्तनहरू अझै सम्भव बनाउन। तपाईं थाह छ, अद्यावधिक संवादलाई को उपस्थिति पूर्ण परिवर्तन भएको छ। डिजाइन सन्देश यो केही वर्ष पहिले थियो बाटो थियो, "संदेश" खण्ड जाने गर्नुपर्छ। यसबाहेक, तपाईंलाई माउस ल्याउन र चयन आवश्यक छ जो एक गियर, पाउनुहुनेछ तल "क्लासिक इन्टरफेस जानुहोस्।"
अघिल्लो कदम पालना, तपाईं क्लासिक संवाद फर्कन सक्नुहुन्छ, तर अरू सबै कुरा अघिल्लो संस्करण VK सामाजिक सञ्जाल हुन सक्दैन कुनै पनि थप कार्य र विशेष आवेदन बिना जस्तै रहनेछ!
"हामी रुचि छैन!"
अब छैनन् सामाजिक सञ्जाल को नयाँ संस्करण सन्तुष्ट गर्ने धेरै मानिसहरू छन्। धेरै मानिसहरू कसरी कम्प्युटर गर्न कुलपति पुरानो संस्करण पुनर्स्थापना बारे जानकारी को एक exhaustive रकम पाउन प्रयास गर्नुहोस्, तर अनुभवी विज्ञहरू विकास अन्य कार्यक्रम को सहायता बिना यो गर्न, यो बस असम्भव छ। मान्छे अघिल्लो संस्करण थप सुविधाजनक थियो भन्ने विश्वास गर्छन्। साथै, केही "VKontakte" को नयाँ डिजाइन नेटवर्क "स्कूलका साथीहरू" र फेसबुक धेरै समान छ भन्ने विश्वास गर्छन्। खैर, तपाईं प्रयोगकर्ता पुरानो संस्करण कायम गर्न आवश्यकताहरु सूची जो एक आवेदन, पनि सिर्जना थाहा थिएन, तर यस्तो प्रभाव मा केही छ?
सामाजिक सञ्जाल को नै समय प्रतिनिधिहरु मा "VKontakte" बस वेबसाइट को अघिल्लो संस्करणमा फिर्ता गरिने छैन भने, यो मामला मा नेटवर्क छोड्न प्रतिज्ञा गरेका प्रयोगकर्ताहरू हाँसिन्। अनलाइन हुन प्रतिज्ञा मान्छे पछि एक महिना जारी भन्ने तथ्यलाई। यो धेरै सहज, आधुनिक र सरल देखिएन किनभने तिनीहरूले, नयाँ संस्करणमा accustomed छन् तार्किक छ।
तथापि, तपाईं अझै पनि सामाजिक सञ्जाल को नयाँ संस्करणमा प्रयोग भने गर्न सक्नुहुन्न प्राप्त र कम्प्युटर गर्न कुलपति पुरानो संस्करण कसरी पुनर्स्थापना सिक्न प्रयास, कि मामला मा तपाईं लाभ अब विस्तृत छलफल गरिनेछ एक जो थप आवेदन, को लाग्न सक्छ।
यो अनलाइन कार्यक्रम तपाईं सामाजिक सञ्जाल "VKontakte" मा पुरानो डिजाइन फिर्ता ल्याउन मद्दत गर्न सक्छ कि एक विशेष सफ्टवेयर छ। "Windose" गर्न कुलपति पुरानो संस्करण कसरी पुनर्स्थापना बारे जानकारी को लागि क्रोम ब्राउजरमा ध्यान, प्रदान गर्नेछ।
त्यसैले, पहिले तपाईँले ब्राउजर सुरु गर्न र माथि दायाँ मा इलिप्सिस ठाडो स्थिति चयन गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि थप उपकरण प्रेस र चयन "एक्सटेन्सन।" अर्को, तपाईँले तल सरेर र क्लिक गर्न आवश्यक "थप विस्तारहरू प्राप्त गर्नुहोस्।"
अब तपाईं गुगल क्रोम वेब स्टोर मा देखा छन्। पसलमा खोज बाकसमा, स्टाइलिश छ कि कार्यक्रम को नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्। अर्को चरण, स्टाइलिश बाहिर गिरा सूचीबाट कार्यक्रम चयन गर्नुहोस् र "स्थापना" बटन क्लिक गर्नुहोस्।
स्थापना पछि, तपाईंले लिङ्क userstyles.org, भनिन्छ गरिने "कार्यक्रममा" मा क्लिक गर्न आवश्यक छ। तपाईं निम्न जानकारी प्रविष्ट गर्नुपर्छ शीर्ष हेर्दै: "। यस कुलपति को पुरानो डिजाइन" त्यसपछि प्रविष्ट गर्नुहोस्, र तपाईंलाई एउटा विशेष विषय देख्नेछन्। प्रासंगिक खण्डमा जानुहोस् र "स्थापना" बटन क्लिक गर्नुहोस्।
मात्र कुरा के तपाईं VK पुरानो संस्करण स्थापना गर्न व्यवस्थित किनभने अर्को चरण "VKontakte" तपाईं प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तर सामाजिक सञ्जाल को नयाँ संस्करण, छैन हुनेछ।
वर्ष लागि नयाँ धेरै, सहज थप रमाइलो र सजिलो महसुस जो, साइट को संस्करणमा प्रयोग प्राप्त गर्न सकिएन किनभने तपाईं पुरानो संस्करण प्रयोग सहज भने प्रयास।
चाखलाग्दो कुरा, नयाँ डिजाइन सामाजिक सञ्जाल "VKontakte" छ के प्रतिक्रिया? छोटकरीमा भन्नुपर्दा, यो डिजाइन मान्छे को एक नयाँ तरिका को प्रकाशन पछि केही समय यसलाई प्रयोग र तिनीहरू सबै भन्दा राम्रो मानिन्छ कि टिप्पण लायक छ। साँच्चै, तपाईं यसलाई आधुनिक डिजाइन "VKontakte" धेरै सजिलो र थप सुविधाजनक छ, र यसको उपस्थिति आधुनिक छ कि स्पष्ट हुनेछ लाग्छ भने, त्यो राम्रो खबर छ।
तर, नयाँ परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्न सक्दैन जसले प्राप्त मान्छे, त्यसैले तिनीहरूलाई लागि हो, र यो लेख प्रस्तुत गरिएको थियो। तपाईं सामाजिक सञ्जाल VK मा पुरानो डिजाइन पुनर्स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि कि मामला मा तपाईं विशेष सफ्टवेयर स्टाइलिश ब्रान्ड, तपाईं यसलाई के गर्न सक्षम हुनेछ जो माध्यम प्रयोग गर्न आवश्यक छ। "VKontakte" को पुरानो संस्करण - तपाईं पहिले निर्दिष्ट पूरा गर्दा, तपाईं लामो-प्रतीक्षा पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ। शुभकामना छ!
एक ब्लग कसरी सिर्जना गर्ने। एक सफल ब्लग को रहस्य
को "संपर्क हाम्रो" मा आइकनका रूपमा सिर्जना गर्न?
सम्पर्क मा चुपके, वा सम्पर्क अफलाइन मा हुन
"VKontakte" सम्भावित साथीहरू को "समारोह कहाँ छ"
आफ्नो घर छोडेर थियो जसले आमा र छोरी, बारे अद्यावधिक राम्रो एक साहित्यिक काम को अन्त्य हुन सक्छ
Aleksandr Gorny, ब्लगर: जीवनी र फोटो
ऋण देखि छुटकारा लागि प्रार्थना: समीक्षा, वर्णन
जो मतलब छोराछोरीको बारम्बार urination गर्न सक्नुहुन्छ?
कति सुन्दर पिन अप फरक लम्बाईहरू को fringe?
विषाक्त र एलर्जी dermatitis: कारण, लक्षण, उपचार
नवीकरण के हो? सामाग्री, प्रविधिहरू, स्तर,
आधार, बाँकी, अवस्था: यस Annunciation एक गाउँ - को क्रास्नोडार क्षेत्र मा समुद्र बाँकी
आमाबाबुको लागि एक पुस्तिका: बच्चाहरु को लागि ड्राइंग 2-3 वर्ष पुरानो
"ब्रोंकोरस" (ट्याबलेटहरू): प्रयोगका लागि समीक्षा, समीक्षा, एनालॉगहरू, तयारीको विवरण
Camisole - एक पोशाक तत्व
को coccyx दुखाइ जब बसिरहेका र माथि उभिएका। मा coccyx वा tailbone दुखाइ: कारण, उपचार
Rene Zellveger पहिले र प्लास्टिक पछि: तुलना